HIGIL | Yaw dhiman? Yay dhagri?
Jiifto / Sugaal Cabdulle Cumar
Hobwaan Sugaal Cabdulle
Posted on Sabti, Agoosto 25, 2012 by Jidhidhico	• Faallo u dhaaf
Inteenna garanaysa, hoobal iyo abwaan (amma hobwaan) Sugaal Cabdulle Cumar—kii yiri, lur ba waxad ku daysaa, labadii walaala ah, midki lagaclahaa weyne—waa waddani Soomaaliyeed, kaas oo ku maansooday, Soomaali badaney, bulshadii wacnaydey: intaan ba’iyo hoogiyo, boqongooyo weyn dhicin; baaxaddiinnu kala tegin; waddankeenna baadka leh, dhawr baarta laga dhigin; waa bilic xorriyadduye, intaan magacu baabbi’in; intaan bala gudaysoo, …
Gabaygan soo socda waxa uu tusaale fiican u noqonayaa maansooyinka an ku khasbanayn tibixqaarraanta amma qaafiyadaynta buuxda. Sida buraanburka oo kale, gabaygani ma laha tibix gaar ah oo ay (ereyo dooran) meerisyadiisu ku duluc-dhabanyihiin—min billow, illaa iyo dhammaad. Hasayeeshee, farqiga gabaygan iyo buraanburka u dhaxeeya ayaa wuxuu yahay in buraanburka uu leeyahay tuduc amma xirmo …
Tixda gabayga ah ee soo socota waxaa tiriyey (AHN) Xaaji Aadan Axmed (Af-Qallooc); arar ahaan ayeyna tixdu ugu soo shaac baxdey buuggii Asaaska Naxwaha Af-Soomaaliga ee ay wada dhigeen guddidii af-Soomaaliga 1971i. Dhabtii, tixdu waxay ilays ku tahay daalicinta dadaalkii iyo dhabar-adeygii guddida—oo uuna Xaajigu xubin sare ka ahaa. Waxa intaa dheer, in tixdu ay …
Maansada saarka ah ee “Hooyadu waa lama huraan” waxaa si habboon oo hufan, oon hambayn lahayn, u hal-abuuray saaryahanka caanka ah, Eebbana hibada uu u siisay dhinaca saarka, ee Careys Ciise Kaarshe (AUN). Muran kuma jiro in maansadani tahay mid hiyigeena kicinaysa, islamarkaana ina garadsiinaysa booska ay hooyadu inoogu fadhido habkeena nolashan taxanaha ah. Waa maanso …
C/laahi Suldaan Maxamed (Timacadde) (AUN) waxa uu ahaa “hanad Soomaaliyeed oo haybaddii maanso [ee] uu lahaa aan umadiisa ku hodin kuna hagardaamayne, wanaageeda ugu adeegay.”≡ Waxa uu ahaa geeraarshe, calanka maansadiisu in badan sawir muuqda ka bixisay Soomaalida iyo “anshaxa xun” ee qabyaaladdu hormoodka ka tahay oo ay had iyo goor u heellanyihiin. Waxaa Timacadde la …
Posted on Arbaca, Agoosto 7, 2013 by Idiris M. Cali	• Faallo u dhaaf
WEYDIIN GODMATAY WQ: Idiris M. Cali August 6, 2013 Waxaad u’kaadisaaba, ood u kuurgashaaba, mar baad la keentaa. Waxaan liqi kari la’aa aaraa’da ku cabbiran tuducda ugu dambaysa ee jiiftada Af-ku-Siran, taas oo guud ahaan innagu hawadinaysa in aynu garanno, kana soo baxno, doorkeenna dadnimo ee nolosha. Waxaan ku talaqaatay, bilaabayna, qalimidda qooraal aan unkaheeda ku … Sii akhri →